Ahaziri akpụkpọ anụ bag factory, Manufacturers na suppliers - Dongguan Yihua Akpa Co., Ltd.
Kpọọ Anyị +86-13580997100
Email Anyị Sales@handbagcn.com
Akpụkpọ anụ ubu akpa
Akpa ubu akpa
Naịlọn ubu akpa
.Lọ > Akpa akpa Akpa akpa > Akpụkpọ anụ Akpa akpụkpọ anụ
Kanvas ubu COMMUTER akpa
Akpa ịzụ ahịa Kanvas
Igwe eji edozi isi
Doo ọnụ akpa ịchọ mma
Akpụkpọ anụ Akpa akpụkpọ anụ
Portable elu-ọkwa akpụkpọ anụ dumpling akpa, waterproof na antifouling, akpa ọnụ na ígwè eri ọzọ udi, adaba ozi kpọtara, obere ahu na nnukwu ikike.
1.Akpụkpọ anụ Akpa akpụkpọ anụ Product parameter
Home, njem. Nchekwa
Akpụkpọ anụ dị elu
Agba, nha, logo, ihe
Nrapado teepu + katọn (nwere ike ahaziri dị ka achọrọ)
Dongguan Yihua Akpa Co., Ltd. bụ ọkachamara na mmepụta nke akpa aka, satchels, backpacks, makeup makeup, toolkits, wdg., Afọ 15 nke ahụmịhe ụlọ ọrụ, ikike mmepụta kwa afọ nke ihe karịrị 1000000 iberibe.
Ọdịdị mara mma, ịrụ ọrụ nke ọma, nnyefe oge, site na North America, Europe, Japan, Korea na mba ndị ọzọ na ndị ahịa mpaghara.
Mbukota: 1 PC / akpa plastic, 20 PC / katọn; ma ọ bụ dị ka ndị ahịa chọrọ.
1.By: ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ buru ibu buru ibu ma ịchọrọ ya ngwa ngwa, ị nwere ike ịhọrọ ibufe site n'oké osimiri iji chekwaa ụfọdụ ibu, nke na-ewe ihe dị ka otu ọnwa;
2.Express: anyị na-ebufe ngwongwo site na UPS / DHL / FEDEX / TNT express, ị nwere ike ịbata na-enweghị apụ, chọrọ ụbọchị 3 ruo 5 iji rute;
3.Air ibu: anyị nwekwara ike inyere gị aka ibu ụgbọ elu, ịkwesịrị ịga ọdụ ụgbọ elu iji buga ngwongwo n'ụlọ, ọ ga-ewe ihe dị ka ụbọchị 2 ruo 7; n'agbanyeghị usoro nnyefe, ọ dabere na ihe ị chọrọ.
1.We na-enye ọrụ OEM. omenala logo / hangtag / retail pack etc.
Omenala usoro gụnyere: ihuenyo obibi, Emborideryã € Deboss / Embossã € kpara kpọọ, Metal ụdị, Laser.
2.We nwere ike hazie dịka ngwaahịa gị / nkọwapụta / ntụle wdg.
3.Ọ bụrụ na ị nwere ule achọrọ, anyị nwere ike ịhazi ule maka gị.
1: Ike akpa aka factory, price uru;
2: Ngwaahịa nwere ike ahaziri ma mepụta;
3: Nkwenye dị mma: Ọ bụrụ na nsogbu nsogbu dị, enwere ike idozi ya ma ọ bụ mezie ya n'efu.
4: Bụrụ onye ahịa VIP ma nye ihe nlele n'efu;
5: N'ihe karịrị afọ iri nke ahụmịhe ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere ọtụtụ ụdị maka ntụnye ndị ahịa.
anyị bụ ndị factory. Dịka ọkachamara na-emepụta akpa aka, anyị na-akwado OEM & ODM.
Q2: Gịnị bụ nke kacha nta iji ibu?
Opekempe iji buru ibu bụ 300 / mpempe / agba.
Q3: Kedu maka ego nlele?
Maka imekọrita mbụ, anyị kwesiri ịlele ihe nlele na ụgwọ mbupu. Samplekpụrụ nlele ahụ dị okpukpu abụọ, ọkara nke ya ga-akwụghachi mgbe emechara iwu ahụ na batrị. Ebu ebubo mmeghe ebu.
Q4: Kedu ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe si ekwe nkwa ịdị mma?
Anyị nwere nlezianya akụrụngwa akara usoro na nlezianya mma management usoro.
Q5: Gịnị bụ nnyefe oge?
Ọ na-ewekarị ụbọchị 30-40 mgbe ị nye iwu ma kwado ihe nlele. Oge akọwapụtara dị n'okpuru iwu iji.
Tags na-ekpo ọkụ: Akpụkpọ anụ Akpa akpụkpọ anụ, ngwaahia, orylọ ọrụ, ndị nrụpụta na ndị na-eweta ya
Eletrọniki ngwaahịa adụ akpa
Obere akpa disinfection akpa
Atụmatụ nlekọta akpa ị na-amaghị2021/04/30
A na-ekwu na akpa bụ onye hụrụ nwanyị nke abụọ n'anya, yabụ kedu ka anyị kwesịrị isi mesoo "onye hụrụ" anyị n'anya? Mgbe ịzụrụ akpa, karịsịa akpa ndị dị oke ọnụ a na-azụta na ọnụ ahịa dị elu, ọ dị mkpa ka ịmara usoro mmezi ziri ezi. Ọ bụrụ na anyị emeghị ya nke ọma, n’oge na-adịghị anya, ọ ga-akpọnw......
Obere nnabata na-akụziri gị ịchekwa akpa iji chekwaa ohere2021/04/30
Otu esi echekwa akpa na-abụ isi ọwụwa maka ụmụ nwanyị, n'ihi na akpa dị iche na akwa ma enweghị ike apịaji, yabụ achọrọ ohere iji chekwaa akpa. Mana obughi nwanyi obula nwere ike icho akwa eji echekwa akpa. Taa, m ga-ewebata aro ole na ole maka ịchekwa akpa.
Ihe nzuzo nke akpa ịchọ mma ụmụ agbọghọ2021/04/30
Ọtụtụ ụmụ agbọghọ ndị hụrụ nlekọta anụ na ejiji mma nwere nhọrọ siri ike oge ọ bụla ha na-aga ebe dị anya. Ha chọrọ ibute ụdị karama na ite dị iche iche, ha enweghịkwa ike ichere ịkpọpụta obere akpa akwụkwọ.
Kedu ka ụmụ nwanyị si ahọrọ akpa?2021/04/30
Mụ nwoke lee elekere, ụmụ nwanyị lere akpa ahụ anya! Akpa aghọwo ihe dị mkpa maka akwa MM ọ bụla, ọ bụkwa ihe nnọchianya nke njirimara na uto. Ndị mmadụ nwere ọtụtụ puku ihu, nweekwa ọtụtụ puku ngwugwu dị iche iche. The textures, ekwekọghị, na agba na-egbu maramara, na Nchikota ha bụ ọbụna ọtụtụ. Ag......
Nwere ike ịkpọtụrụ anyị maka ajụjụ ọ bụla. Ọnụahịa anyị na ọrụ anyị ga-eju gị afọ.
Nke 179, Huancheng Street, Shimei Youyi Road, Wanjiang District, Dongguan City
Copyright 2020-2021 Dongguan Yihua Handbag Co., Ltd.